Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii Jaaliyadaha London oo guul ku soo dhamaaday & Madaxda JWXO oo warbixino siiyay jaaliyadda
Shirkii Jaaliyadaha London oo guul ku soo dhamaaday & Madaxda JWXO oo warbixino siiyay jaaliyadda
Posted by ONA Admin	/ November 12, 2012
Magaalada London ee Cariga Ingiriiska waxaa ku qabsoomay kulan ay soo qaban qaabiyeen Jaaliyadaha Ogadeniya ee ka dhisan wadanka UK. Kulankan oo u jeedadiisu aheyd in lagu kala warqaato laguna qiimeyo xaalada dhulka iyo shacabka Somalida Ogadeniya. Kulankan muhiimka ahaa ayaa waxaa kasoo qeyb galay madax sare oo kamid ah Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya (JWXO) oo uu hoggaaminayo Gudoomiyaha JWXO Admiral Maxamed Cumar Cismaan. Waxaana gudomiyaha wehlinaayay Hoggaanka Arrimaha Dibada ONLF Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi iyo Hoggaanka Abaabulka Iyo Arrimaha Bulshada Mudane Xaaji Maxamed Cabdi Yasin Diirane.
Kulankan ayaa waxaa kale oo kasoo qeybgalay boqolaal kamid ah jaaliyada somalida Ogadeniya oo kakala yimid Magaaloyinka Manchester, Midlandska, iyo magaalada London oo marti loo ahaa. Waxaa dadku isugu jireen Ururka Haweenka Somalida Ogadeniya, Ururka dhalinyarada OYSU, taagerayasha halganka ee Somaliweyn iyo aqoonyahno ku xeel dheer xaaladaha geeska Afrika.
Shirkan ayaa waxa si diiran loogu soo dhaweyay Gudomiyaha Jabahada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya. Gudomiyaha ayaa soo jeediyay qudbad aad u heersareysa oo uu kaga waramay xaalada Shacabka Somalida Ogadeniya ee waqtigan taariikhdi halgankan, buslahda somaliweyn oo lafdhabar u ah halganka iyo arrimo badan oo kale oo ku soo beegmay waqtigeedi.
Gudomiyaha ayaa si niyad sami ah u sheegay in maamulka Jabhada Wadaniga Xoreynta Ogadeniya aad ugu farxeen taagerada shacabweynaha Somalida Ogadeniya oo si buuxda ugu taageray Jabhada ONLF go’aan qaadashadi ay sida adag ugu qaadaceen inay dastuurka Ethiopia qaataan. Gudomiyaha oo si diiran u hadlaya ayaa sheegay in arrintaas kamid tahay tiirasha asaaska JWXO oo shegaya in shacabka Ogadeniya lagumeysto.
Hadii aan nahay ummadaas Ogadeniya ma nihin Ethiopian mana qaadan karno dastuurka Ethiopia oo ah mid aan namatalin. Dastuurka Ethiopia waa lanagu mamuli kara madama oo aan ku hoos jirno gumeysi lakiin mid aan aqoonsanhay maahan. Waxa uu noola mid yahay nidaamki dastuurki guemeysiga Talyaaniga Muqdisho (Konfur) uu ku maamulayay. Kii Ingiriisku ku maamulayay Waqooyi iyo kii faransiisku ku maamulayay Djibouti. Hadaan nahay shacabka Ogadeniya sinjigayagu marna isma badalayo waxaanu nahay Somali waxaanu nahay Xoriyad doon ma nihin Ethiopian. ayuu gudomiyaha ONLF si diiran oo kalsnooni buuxda leh u yiri.
Waxa uu gudomiyhu ku kaftamay oo kale, Shacabkayagu waa nagu aamini waayen arrintaas waxaad moodaysay in dareen laqabay. oo laga cabsi qabay in dastuurka Ethiopia shacabka usoo qaadno, midaas oo suurto gal ahayn. Sidoo kale Waan ku faraxnay in shacabku si buuxda u taageray go aanki jabhada.
Gudomiyaha ayaa sido kale ka hadlay arrimo la xidhiidha daris wadaaga. Waxa uu ugu baaqay shacabka Jamuhuriyada Somalia maadama oo dowlad qaran ka dhisantay Somalia in Dowladaas ay ilaaliso daris wadaaga oo aysan dhicin in wadamo kale faro galin kusameyaan Somalia. Waxa uu ugu baaqay in shacabka Ogadeniya ee xadgudubka badan kasoo gaadhay xuduudaha Somalia in aysandib u dhicin oo dowladu adkeyso daris wanaag fiican.
Gudomiyaha JWXO ayaa sidoo kale shacabweynaha Somalida Ogadeniya usoo jeediyay baaq aad u xoog badan uu ku dhiiri galinayo shacabka inay xoogooda oo dhan inay galiyaan halganka. waxa uu baaq u jeediyay in halganka dhamaan somalida Ree Ogadeniya ay si wada jir ah ugu istaagaan gacmahana isqabsadaan.
Waxaa kale oo kahadlay arrimiihii Wadahadlki dhicisobay ee dhexmaray ONLF iyo Gumeysiga Ethiopia Dr Cabdi raxmaan Sheekh Mahdi oo si faah faahsan uga waramay.
Hoggaanka Abaabulka Iyo Arrimaha Bulshada Xaaji MAxamed Cabdi Yasin Diirane ayaa soo bandhigay casharo maqal iyo muuqaal ah oo uu kaga hadlay kheyraadka dhulka Ogadeniya ceegaagan midkaas oo aad looga helay aqoon badana u kordhisay shacabweynihi kasoo qeybgalay kulankan.
Kulankan oo ay kasoo qeyb galeen aqoonyahan ku xeel dheer siyaasadaha Geeska Afrika ayaa waxaa kamid ahaa dadki ka hadlay Professor Yusuf Cadami oo si cilmiyaysan uga hadlay astaamaha halganka guuleysta isaga oo hididiilo fiican ka bixiyay guulaha Halganka Ogadeniya usoo hoyday.
Shirkan ayaa waxa kale oo ka hadlay
gudomiyaha Jaaliyada Ogadeniya ee Manchester Maxamed Cali
Gudomiyaha Jaaliyada Ogadneiya ee Birmingham Mudane Jacfar
Ururka Haweenka Ogadeniya oo u hadleen Marwo Sooc iyo Hibo Cali
Uruka Dhalinta OYSU- Halgame Salaad (Xoghayaha OYSU UK)
Ururka haweenka Somaliyeed ee UK
Urur dhalinyaro somaliyeed oo ka dhisan UK oo u hadleen Ducaale iyo Hirad oo caan ku ah in qadiyada Ogadeniya ay so joogto ah ugu ololeyaan.
Barnaamijka shirkan oo ahaa mid aan lagu daalayn oo xiiso dheeri ah lahaa ayaa waxa ishaadu soo jiidanaysa labiska dharka laqabay oo ahaa dhamaan dharka Calanka Ogadeniya ka sameysan iyo fanaaniinta Halganka Ogadeniya oo iyana meeshaas kolba heeso wadaniya oo qiiro iyo abaabulba siinaya shacabka ku nasinaayay. Fananiinta goobta joogtay ayaa waxaa kamida Xaawa Luul, Fanaan Yusuf Yare, iyo wiilka da’da yar ee
Xasen Jaja oo isagu munaasabadan hees cusub oo uu ugu talo galay munaasabadan halkaas ka qaaday.
Sida caadada u ah halganka Ogadeniya oo ah mid caruur iyo kabiir loo siman yahay ayaa waxaa muuqaal gooni ah lahaa Gabadh aad u da yar oo lagu magacaabo Halganto Maxbuuba Shariif oo Gabayo ku baxaya Luqada af Englishka ka tirisay munaasabadan. Ereyada Gabayadaas kujiray oo dad badan qiiro galisay. Gabadhaas da’da yar ayaa waxaa dhashay Halyeyada weyn ee caanka ah Xaliimo Gobaad.
Filimaan maqal iyo muqaal ah kala soco Ilays…